Tattoo tattoo ee naasaha hoostooda, maxay ka dhigan yihiin? dhaawacaa? | Tattoo
Tattoos laabta hoosteeda
Susana godoy | | Tattoos leh qaabab, Tattoos, Tattoos loogu talagalay dumarka, Noocyada Tattoo-ka
En Tattoo Waxaan ka hadalnay marar badan oo ku saabsan tattoos-yadaas ay dumarku u adeegsadaan inay noqdaan kuwo dareen iyo soo jiidasho leh. Iyo, ma jiro qof adduunka ku nool tattoo oo diidi kara inay jiraan noocyo noocyo ah oo ku habboon haweenka inay noqdaan jinsi. Sababtaas awgeed maanta, waxaan rabnaa inaan ka hadalno noocyada qaar ka mid ah tattoosyada galmada loogu talagalay haweenka.
Gaar ahaan, waxaan ka hadli doonnaa wax kasta oo la xiriira tattoos loogu talagalay haweenka aagga aadka ugu dhow jirka. Midig naasaha hoostooda. The tattoos naasaha hoostooda Waxay kasbadeen caan sannadihii la soo dhaafay maaddaama ay yihiin hab ku habboon oo ay ugu muuqdaan galmo iyo jinsi badan. Nooc aad u dhow oo loo yaqaan 'tattoo' oo loogu talagalay haweeneyda lafteeda laakiin taasi waxay la timid xaddiga weyn ee dareenka.
Iyadoo ay taasi jirto, in badan oo ka mid ah haweenka go'aansada inay helaan noocyada noocan oo kale ah ayaa durba ku lug leh adduunka farshaxanka jidhka iyo Waxay leeyihiin noocyo kale oo sawir gacmeedyo ah. Anigana shaqsi ahaan runta ayaan u sheegaa bayaankan maadama sida caadiga ah ay tahay, hadii gabadhu go aansato inay tattoo gasho naasaheeda hoosteeda iyo inay ku wareegayso dhamaan aagaas jirka oo dhan, ma noqonayso markii ugu horaysay ee ay timaado lagu xardhay.
1 Waa aag xasaasi ah oo lagu sawiro
2 Waqtiga la dhaafaa waa inuusan caqabad noqon
3 Micnaha taatuuga naasaha hoostooda
4 Noocyada ugu fiican iyo noocyada tattoos loogu talagalay naasaha hoostooda
5 Sawirrada Tattoos-ka Dumarka ee loogu talagalay Haweenka
Waa aag xasaasi ah oo lagu sawiro
Qofna ma diidi karo in aaggan jidhka haweenku yahay mid aad xasaasi u ah. Sidaa darteed, farshaxanka tattoo waa inuu tixgeliyaa tan marka la sameynayo tattoo si looga fogaado xanuun xad-dhaaf ah ama natiijo aan fiicnayn. Iyo, haddii ay jiraan wax lagu garto astaamahan (sidaan hore u sheegnay), waa inay leeyihiin xariiq ganaax iyo nadiif ah. Haddii kale, tattoo wuxuu lumin doonaa inta badan saameyntiisa.
Iyo kahadalka heerka xanuunka. Ma deegaan aad u xanuun badan baa? Wixii aan ka maqlay, haa. Way ka xanuun badan tahay in lagu sawiro aag kale oo jirka ka mid ah, si kastaba ha noqotee, haddii aan tixgelinno in inta badan tatooyadani ay ka maqan yihiin buuxin ama hoos-u-dhigis, muddada tattoo-ku ma dheereyn doono xad-dhaaf ah. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa waa xanuun la qaadi karo dhibaato la'aan.
Marka ay timaaddo daaweynta tattoo, waa inaan sidoo kale taxaddar gaar ah u yeelanaa si loo hubiyo in maqaarku si habboon u bogsado oo sidaas ayaan uga fogaan karnaa inay lumiso xooggeeda ama ay soo saarto khad xad-dhaaf ah. In kasta oo dabcan, taasi kuma xirna annaga oo keliya. Iyada oo ay taasi jirto, waxaan kugula talineynaa taxaddar xad dhaaf ah marka la daaweynayo tattoo.
Waqtiga la dhaafaa waa inuusan caqabad noqon
Waxaa jira kuwa u maleynaya in tattoosyada naasaha hoostooda ay yihiin fikrad xun tan iyo, sanadihii la soo dhaafay, aaggan jidhka haweenku wuu ka sii darayaa, sidoo kale, ma doonayo inaan faahfaahin ka bixiyo. Dhamaanteen waan ognahay waxa aan ula jeedo. Sida cad, tani ma ahan inay ahaato qodob go'aan qaadasho leh si loo helo nooca tattoo ama wax kale ah. Waana taas, Tatoogu waa go'aan ay tahay inaan ku fikirno si qoto dheer oo aan uga tagno waxyaabaha yar yar sida ka fikirida sida aan u ekaan doonno markaan gabowno ama sida aan u eegi doono maalinta arooskeena.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ku sameysid tattoo kacsi leh aagga wax yar ka hooseeya naasahaaga, iska ilaali inaad ka fikirto sida aad u ekaan doonto markii aad weynaato ama xaaladaha kale ee mustaqbalka. Waa aag aad isugu dhow oo qarsoon dhib la'aan (xitaa xagaaga). Qiyaastaadu ha duusho oo ha u ekaato mid dareen badan oo mahadsan tan noocan ah sawirada.
Micnaha taatuuga naasaha hoostooda
Waxay u muuqataa in mid ka mid ah beddelka weyn uu yahay tattoos naasaha hoostooda. Waxaa jira dumar badan oo iyagu doorta mana nihin wax lala yaabo. Wax ka badan maxaa yeelay naqshadaha sidoo kale aad ayey u kala duwan yihiin. Waxay ka socon karaan aagga dhexe si ay u xadeeyaan qaybta xabadka.
Dhinaca kale, waa in la sheegaa in macnaha tattoos ee naasaha hoostiisa ay la xiriirto naqshadda lafteeda. Qabiil uma eka ubax. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu yeelan doonaa astaamo u gaar ah iyo sidoo kale qofka uu isagu doonayo inuu siiyo. Weli, waa in la yiraahdaa markaan ka fikirno aag gaar ah oo aan dooneyno inaanu sawirno, sidoo kale waxay leedahay macno u gaar ah.
Waxaa laga yaabaa inay tahay wax yar qurux badan laakiin ma seegi karno munaasabadda si looga hadlo dareenka iyo soo jiidashada. Laba sababood oo xoog leh oo ah sababta aan u xirano naqshad noocan oo kale ah. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan iftiiminaa naagnimada. Qaar badan baa iyaga u haysta inay yihiin Tattoo-ga ugu xiisaha badan adduunka. Maxaa iyaga uga macno wanaagsan tan!
Noocyada ugu fiican iyo noocyada tattoos loogu talagalay naasaha hoostooda
Waxaan u nimid qodobkaan, waxaan la yaabanahay qaababka aan ku heli karno tattoo noocan ah. Hoos waxaad ku leedahay dhameystiran gallery kaas oo aan ku soo ururinno noocyo kala duwan oo tattoos ah naasaha hoostooda. Ujeeddadiisu waa in lagu ciyaaro qaabka naasaha laftooda loona abuuro curisyo joomatari ku dhisan xariiqyo. Waxaan sidoo kale heli karnaa astaamaha gacmaha Faatima, dhakada ama xitaa ubax.
Beddelka kale ee xiisaha leh ayaa ah in la sawiro weedh ama ereyo la socda dusha naasaha.. Marka lagu daro la ciyaarista dusha naasaha, sidoo kale aad ayey u fiicantahay haddii tattoo dhexe laga sameeyo labada naas dhexdood iyo in tattoo laftiisa uu ku faafo labada naas hoostooda. Inta badan waa tattoos madow, in kasta oo aan sidoo kale arki karno qaar leh faahfaahin midab leh. Dabcan, sidaan horay u soo sheegnay, arrintiisu waxay tahay in tatuuxu uu yahay mid xarrago leh, ganaax iyo xitaa mid aad u yar. Sidan ayay haweeneydu ugu ciyaari kartaa jilitaankeeda, aakhirka, waxay muujisaa nafteeda jinsi ka badan waxa aan uga hadlayno tattoosyadan.
Rag badan ayaa u arkaa haweeney la xardhay inay tahay mid aan la diidi karin waana cadahay hadaad hesho nooca nooca saxda ah inaad dhibco badan dhalin karto Adigana adiga, maxaad u malayn nooca noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' oo si gaar ah loogu talagalay haweenka? Waan jecel nahay iyaga.
Sawirrada Tattoos-ka Dumarka ee loogu talagalay Haweenka
Hoos waxaad ku leedahay gallery ah tusaalooyinka tatooyada naasaha hoostoodas si aan kuugu dhiirrigeliyo inaad sameysid tattoo noocan ah:
Tattoos feerad caqli leh - loogu talagalay dumarka oo keliya!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos laabta hoosteeda
Tattoo dhabarka hoose